2020 ခုနှစ်ရဲ့ " ဆောင်းဦးလလယ် လပြည့်ည" ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ? ၊ ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ? - JAPO Japanese News
ဟူး 07 Oct 2020, 16:16 ညနေ
၁ နှစ်ပတ်လုံးရဲ့အလှဆုံးလပြည့်ညကိုပြောပါဆို “ ဆောင်းဦးလလယ် လပြည့်ည” ပါပဲ…
ဂျပန်မှာတော့ အရင်ကတည်းက “ ဆောင်းဦးလလယ် လပြည့်ည” ကိုကြည့်ရင်း နောက်နှစ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုဆန္ဒပြုကြတဲ့ အလေ့အထရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာပြန်တော့လည်း ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းအေးစပြုလာတဲ့အချိန် လုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ လကိုကြည့်ခြင်းပါ။
“ ဆောင်းဦးလလယ် လပြည့်ည” ကို harvest moon လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် harvest moon ဘယ်အချိန်ကျသလဲလို့ပြောရင် ၁၀ လပိုင်း၊ ၁ ရက်နေ့ပါ။ (ပြောပြတာတောင် နည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီနော်)
harvest moon ဆိုတာကတော့ lunar calendar မှာ ၈ လပိုင်း၊ ၁၅ ရက်နေ့ညမှာ မြင်ရတဲ့လကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်တော့ ၁၀ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့က lunar calendar ရဲ့ ၈ လပိုင်း၊ ၁၅ ရက်နေ့ညမှာ မြင်ရတဲ့လနဲ့ သွားကိုက်ညီပါတယ်။
lunar calendar မှာ ၇ လပိုင်းကနေ ၉ လပိုင်းက ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ အလည်တည့်တည့်ကျတဲ့ ၈ လပိုင်း ၁၅ ရက်‌နေ့ဟာ ဆောင်းဦးလလယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းချင်တာကတော့ ဒီ ၁၀ လပိုင်းထဲမှာ လပြည့်နေ့ ၂ ကြိမ်တောင်ရှိပါတယ်တဲ့…
ပထမတစ်ကြိမ်က ၁ ရက်နေ့ညမှာမြင်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ၃၁ ရက်နေ့ညမှာမြင်ရမှာပါ.. (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေလည်းဖြစ်နေပါတယ်)
၂၀၂၀ ခုနှစ်က ကမ္ဘာမြေပြင်ကနေအဝေးဆုံးလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါမယ်တဲ့..
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၄ လပိုင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးလပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ “ ပန်းရောင်လ” နဲ့နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ရင်၊ ဒီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာပြည့်မယ့်လဟာ အနည်းငယ်သေးငယ်နေမှာဖြစ်ပြီး၊ အလင်းရောင်ကလည်းခန့်မှန်းချေ 30% လောက်အလင်းဖျော့နေမယ်လို့ တွက်ချက်ကြပါတယ်။
၁ လတည်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည့်မယ့်လကို “ blue moon” လို့လည်းခေါ်ပြီး၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်လာစေမယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ကဲ ဒါဆို harvest moon ကိုပထမအကြိမ်သတိမပြုမိလိုက်သူတွေအတွက် ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်နော်…
စိတ်ဓါတ်ကျစရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဟာလည်းမကြာခင်ပြီးဆုံးတော့မှာပါ။ ဒီလိုအချိန် ကောင်းကင်မှာရှိသမျှအင်အားနဲ့ အလင်းပေးနေတဲ့လကိုမော်ကြည့်ရင်း ၁ နှစ်ပတ်လုံးကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်နော်…
နပန်းသမားလည်း အသည်းနှလုံးနဲ့ပါ !!!!!!
အနာဂတ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မယ့် စားသောက်ဆိုင်မှကြိုဆိုပါတယ် !!!!!